Suuraalee dinqisiisoo badhaasa Rooyaal Sosaayitii injifatan - BBC News Afaan Oromoo
Suuraalee dinqisiisoo badhaasa Rooyaal Sosaayitii injifatan
Dorgommiin suuraa Rooyaal Sosaayitii kan suuraaleen saayinsii dameewwan qorannoo addaa addaa akka qorannoo hawaa (Astronomy), Saayinsii dachee fi haala qilleensaa dabalatee damee torba kan hirmaachise suuraaleen 1100 dorgommiif kan irratti dhihaatanii ture.
Xiyyaara irraa achii gadi kan ka'e suuraan cabbii kuufaamaa Antaarkitiik kan daabboo mumuramaa fi baaduun irratti dhangalaa'e fakkaatu kun dorgommii suuraa kana irratti suuraa waggaa ta'uun injifateera.
Piiteer Konveeyiin kan ka'e suuraan kun damee saayinsii dachee fi haala qilleensaa keessa kan dhufan hunda kan mo'ate qofa utuu hin ta'in, dorgommii waliigalaa irrattis tokkoffa ta'uun filatameera. Suuraan kun bara 1995 Antarkitiikaa gara kibbaa keessatti kan kaafamedha.
Niikkoo Debruuyin nama jedhamuun suuraan ka'e kun ammoo damee Ikooloojii fi saayinsii naannoo keessatti kan injifateedha.
Antarkitiikaa irratti kan argamtu odola xiqqoo Maariyoon keessa akka tasaa qurxummoonni gurguddoon lama dhufanii galuun, Peenguwiinota gobbatanii dhaabbachaa turanii fi kan bishaan keessa bashannanaa jiran wayita ajaa'ibsiisan suuraa ka'edha.
Suuraan Antooniwoo Daansiilaan ka'e kun ammoo bineensa 'Beer' jedhamuu kan bishaan bira ciisee bishaan keessa ilaalu kan agarsiisudha. Kunis damee qorannoo amalaa keessaa injifataa ta'eera.
Suumitaa Daataa nama jedhamuun suuraan ka'e kun ammoo gosa simbirroo Roolar jedhamtu wayita isheen torbaan qabaa nyaattu kan agarsiisuudha. Kun ammoo damee qorannoo amalaa kessatti lammaffaa ta'uun kan filatameedha.
Suuraan Saabriinaa Koolaariin ka'ee fi dhangala'aa abidda volkaanoo agarsiisu kun damee saayinsii dachee fi haala qilleensaa keessatti maqaan ishee kabajaan akka ka'u taasiseera.
Suuraan Wey Feeng Zuun ka'e kun Ameerikaa fi biyyoota biroo keessatti dukkana aduu dura goruu yookan 'Eclipse' jedhamuun beekamudha. Suuraan kun dame qorannoo haawaa (Astrology) irraa lammaffaa kan baheedha.
Deeviid Kontaastiiniin kan ka'e suuraan kun ammo damee saayinsii amalaa keessatti lammaffaa kan baheedha.
Damee Ikoolojii fi saayinsii naannoo keessatti badhaasa kabajaa argachuu kan danda'e Kaarloos Jaareed, suuraa fattee wal yaabbatanii jiran lamaa kaasuun ture.
Goondaa hinmul'anne maqaa jedhamu kan keenameef suuraan kun Toomaas Indileeyin nama jedhamuun kan ka'eef damee Ikoolojii fi saayinsii naanno keessatti lammaffa kan baheedha.